Imikhiqizo yaseSpain yokuhlanza esimeme nemifino | Bezzia
Imikhiqizo yokuhlanza esimeme ne-vegan yaseSpain
UMaria vazquez | 11/09/2021 10:00 | Ikhaya
E-Bezzia sihlala sikukhuthaza ukuthi usebenzise izixazululo zokuhlanza esimeme. Ukuthembela ekunciphiseni nasekunciphiseni amagciwane kwiviniga emhlophe noma ulamula kanye nasekhonweni le-bicarbonate lokunciphisa nokususa iphunga elibi, phakathi kwabanye. Ngamafuphi, ukudala imikhiqizo yakho yokuhlanza ukuze gwema ukupakisha kwepulasitiki okunobuthi nokungadingekile.
Siyazi, noma kunjalo, ukuthi akuwona nonke enifuna ukuqala ukuzama ukwakha izixazululo ezahlukahlukene. Futhi yingakho namuhla sihlanganyela nawe ezinye Imikhiqizo yokuhlanza esimeme ne-vegan yaseSpain. Ilungele ukulondolozwa kokupakisha, isikhala nemali.
1 Ubumnandi & Kwenziwe
3 Hambisa & Geza
Ubumnandi & Kwenziwe
I-Dicha ne-Hecho ikunikeza uhla lwezinto eziphilayo, izikhuhli, izinto eziningi ezihlanza indawo yangasese kanye nezindlu zangasese ngefomethi yoketshezi, ezipakishwe kumakhadibhodi asetshenziswe kabusha. Phakathi kwemikhiqizo yayo eminingi, namuhla sibheka i- Isixazululo se- "Multi-surface and Window Cleaner" ngekhono layo lokuhlanza zonke izinhlobo zezindawo ekhaya.
Lesi sixazululo sokuhlanza ngophawu lwe-European Ecolabel olusalindile sisebenza ekuhlanzeni zonke izinhlobo zezindawo ngaphandle kokushiya imigqa. Okwabo ama-pods ancibilika emanzini Ziyayigwema imfucuza futhi zifakwa emabhokisini amancane amakhadibhodi angama-90% asetshenziswe kabusha futhi ama-10% avela emahlathini aphethwe ngendlela esimeme eduze, ikakhulukazi eNyakatho yeSpain.
Ukuyisebenzisa kulula kakhulu. Faka umthamo owodwa we-Bliss & Made kwisifutho, engeza amanzi ashisayo, unyakaze futhi uzoba ne-Multisurface ne-Window Cleaner yakho ekulungele ukuyisebenzisa. Isifutho ongasithenga kwaDicha & Hecho singaba phinda usebenzise ama-refill kaninginingi ngendlela ofuna ngayo, ize ihlukane nokusetshenziswa. Ibhokisi ngalinye lifaka imithamo emibili yokugcwalisa i-750ml spray yakho, kabili futhi kuthengiswa ngo- € 2,30 (3,90 nesifutho).
Ngaphezu kokungaphathi noma yini i-Ecolabel evimbela (i-phosphates, i-EDTA, i-microplastics, i-nanosilver, i-nitros ne-polycyclic musks ..) amafomula omkhiqizo awanasulphate ngoba zingaba yingozi ezindaweni eziphila emanzini. Isiwasho sayo sinemvelaphi yemifino kanti amakha aso angenye yalezo ezivunyelwe ngumthetho we-Ecolabel. Izithako zawo yilezi: Isopropyl alcohol, [methyl-2- (methyl-2-methoxyethoxy) ethoxy] propanol, Polyethylene glycols pm 400, C9-11 pareth-8, Aqua, Methoxyisopropanol, Polyvinyl alcohol, Parfum, Benzotriazolyl dodecyl p-cresol, Umbala
INeletab ikunikeza indlela yokonga, esebenza kahle futhi esimeme yokuhlanza ikhaya lakho nokunakekela elakho. Imikhiqizo yokuhlanza ejwayelekile ingamanzi angama-98%. Iphilisi ngalinye le-neletab esilisebenzisayo, ngakho-ke, ibhodlela elilodwa elincanyana okufanele sililahle noma silisebenzise kabusha. A) Yebo ugwema amapulasitiki asebenzisa into eyodwa kanye nokukhishwa kwe-CO2 ngenxa yokuthuthwa kwale mikhiqizo.
INeletab inemikhiqizo emithathu kukhathalogi yayo: i-multi-surface cleaner, i-windows cleaner kanye ne-bathroom yokuhlanza. Zonke zethulwa ngefomu lephilisi futhi zakhiwa ngezithako zemvelo eziqinisekisiwe. I-multi-surface cleaner ikakhulukazi yenziwe ngezithako ezilandelayo: i-Citric Acid, i-Sodium Benzoate, i-Sodium Percarbonate, i-Polyethylene Glycol, i-Potassium Sorbate, i-Sodium Carbonate, i-Gluconolactone, i-C12-18 Ethoxylated Alcohol ne-Fragrance
Ukuzisebenzisa kulula kakhulu, nje abeke amaphilisi kufafaza okwakho noma okuthengwe kwaNeletab bese ugcwalisa ibhodlela ngo-750 ml wamanzi ompompi. Kungakapheli nemizuzu emithathu ohlanzayo uzobe esekulungele ukusebenzisa. Kunamabhokisi wemithamo ye-3, 6 ne-9 enamanani aphakathi kuka- € 178-138 umthamo ngamunye.
Hambisa & Geza
Lezi zithandani ngemuva kweMove & Wash zibone ukuthi yonke into yokuhlanza ebiyisebenzise ekhaya yenziwe ngamakhemikhali nezinto ezingcolisayo. Iqiniso lokuthi banqume ukushintsha ngemuva kokuzama amaNepalse Washing Nuts nokuqinisekisa ukuthi bangamela isixazululo esibalulekile sesikhathi esizayo ngokuzayo. ukwehliswa kokungcola komhlaba.
Amantongomane okuwasha, impuphu yokuwasha kanye nensipho eyimpuphu amanye awo Imikhiqizo ye-Move & Wash ehamba phambili nemikhiqizo ethandwa kakhulu . Imikhiqizo engeyona enobuthi emaphaketheni asimeme esiyichaza kafushane ngezansi:
Impuphu yesobho. I-100% yokuhlanza yemvelo, imvelo, i-biodegradable ne-hypoallergenic. Isetshenziswa emshinini wokuwasha ngokufaka amathisipuni ama-2 egumbini lokuhlanza noma ngqo esigubhini. Iyahlanza futhi ithambe futhi iyasebenza futhi emazingeni okushisa aphansi. Amandla ayo aphezulu e-degreasing futhi ayenza iphelele njengomshini wokuwasha izitsha womshini kanye ne-citric acid nanjengendawo yokuhlanza indawo.
Ukuwasha amantongomane. I-100% yokuhlanza yemvelo, yemvelo kanye nokubolayo. Ngokunikezwa isitifiketi kwe-India Organic, kungumkhiqizo ophephile wokuhlanza, okhethekile wezingubo zezingane noma abantu abanezinkinga zokungezwani komzimba. I-saponin ithambisa izingubo ngokwemvelo futhi ngesikhwama esisodwa esingamakhilogremu ungakwazi ukumboza ama-washes angama-240.
Ukugeza amantongomane impuphu. Njenge-Washing Nuts, isetshenziselwa ukuwasha izingubo, ukufaka isipuni kusigubhu somshini wokuwasha. Iyahlanza futhi ithambe futhi iyasebenza futhi emazingeni okushisa aphansi. Amandla ayo aphezulu e-degreasing ayenza iphelele njengomshini wokuwasha izitsha, isikhuhli noma ukuhlanza ama-hobs ekhishi.
Uma ungalokothi uqhamuke namafomula akho noma ungafuni ukuchitha isikhathi kuwo, le mikhiqizo yokuhlanza esimeme ne-vegan ingaba enye indlela enhle yemikhiqizo yokuhlanza yendabuko. Ngabe unentshisekelo kulezi zinhlobo zemikhiqizo?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Imikhiqizo yokuhlanza esimeme ne-vegan yaseSpain